Qisada Qaabkii Uu Frank Ribery Ku Qaatay Qaatar Diinta Islaamka
Qisada Qaabkii Uu Xiddiga Bayern Munich Frank Ribery Ku Qaatay Diinta Islaamka
May 6, 2019 Balaleti 0
Frank Ribery amd Bilaal, maxaad ka taqanaa nolosha xiddigaan Muslimka ah iyo qaabkii uu ku qaatay diinta Islaamka? Maxaad kala socotaa doorkii ay ku laheyd gabadha uu qabo ee Wahiiba Bilhaame, shilkii gaaray ee seejin karaay noloshiisa? Muxuu ku doortay magaca Bilaal Ibnu Rabaax? Intaas iyo inka badan ayaa uga bogan doontaa qormada maanta.
Si wacan looma ogeyn in Frank Ribery uu Muslim yahay ilaa iyo Koobkii Adduunka ee 2006, markaasoo la arkay ka hor kulankii France iyo Switzerland isagoo duceysanaya islamarkaana wajiga ku masaxaya qur’aankii uu akhriyay. Kulankaas ka dib ayaa wariye waxa uu weydiiyay: Miyaad bedeshay diintaada? Ribey ayaa ku jawaabay: “Aniga Mabadalin diinteyda aniga Muslim baan ahay waalidkeyna iiguma Talogalin, Iyaguna waxey doorteen diintooda, Waana ku faanayaa,. Gurigeyda waxaa la iigu yeera magaca Bilaal.”
In Ribery uu soo Islaamo waxaa sabab u ah gabadha Algeria u dhalatay ee Wahiba Bilhaame, waxaana markii ugu horeyay ay ku kulmeen guriga walaalkeed ahna nin ay aad isagu dhow yihiin Ribery oo lagu magacaabo Maalik, kaasoo deganaa magaalo xeebeedka Conti Boulogne ee Faransiiska ee uu Ribery ka soo jeedo.
Sannadkii 2004 ayuu Ribery uu gabadha ka dalbaday inuu guurado, isagoo mar ka sheekeynayay waqtigaas ayaa yiri: “Waxaan doonay inaan guursado Wahiiba waana ku adkeystay, waxaan sameeyay wax kasta oo uu sameyn lahaa qof wax jecel, waxay dhiiranaanteyda saa’iday markii aan ogaaday inay dareen la mid ah ii heyso islamarkaana ay aqbaleyso dalabkeyga guur balse waxa ay ku adkeysatay inaan qaato diinta Islaamka.”
Frank Ribery ayaa intii uu Masaajidka ku noqnonayay waxaa caawiyay nin Muslim ah oo lagu macaabo Cazaam kaasoo uu ka codsaday inuusan arintaan cid u sheegin inta uu ka baranayo diinta Islaamka. 3 bilood ka dib barashadiisa diinta Islaamka waxa uu Ribery qaatay diinta Islaamka waxaana uu guursaday Wahiiba.
Ribery ayaa ku adkeysanaya in guurkiisa darteed aysan ku qasbin qaadashada diinta Islaamka balse ay ku timid isaga doonistiisa, wuxuu yiri: “Qoyska Wahiiba waxbadan ayey igu caawiyeen oo ay ka mid tahay sidii aan wadada saxda ku qabsan lahaa, waxaan aaminsanahay in go’aankeyga uu yimid ka dib markii aan yaqiinsaday in diinta Islaamka ay tahay mida saxda ah.”
Sababtii uu u doortay magaca Saxaabiga weyn ee Bilaal ibnu Rabaax ka dib qaadashadiisii Diinta Islaamka Waxa uu yiri: “Ayeeyada xaaskeyga ayaa ii bixisay magaca Bilaal mar ay fasax inoogu timid magaalada Conti Boulogne, waa ay ku adkeyd inay ku dhawaaqdo magaca Frank, waxaana ay bilowday inay iigu yeerto Bilaal. Aad baan ugu farxay markaan ogaaday booska iyo miisaanka uu leeyahay saxaabiga weyn Bilaal Ibnu Rabaax.”
Kadib markii uu qaatay diinta Islaamka waxa uu qiray iney wax badan iska badaleen noloshiisa. Waxa uu bilaabay inuu Salaada joogteeyo isagoo mar ka hadlayay ayaa yiri: “:Ka hor bilowga ciyaar kasta waxaan dukadaa Salaad, waa muhim inaan nafta dejiyo islamarkaana aan xadido ujeedkeyga. Islaamka waxa uu i siiyaa awood garoonka gudahiisa iyo banaankiisaba ah”
Ma aheyn nolosha Frank Ribery mid sahlan, waxaana uu soo maray dhibaatooyin kala duwan. Yaraantiisii waxa uu galay shil gaari oo halis geliyay noloshiisa, welina muuqaaladii dhibkaasi kama baab’in wajigiisa. Shilka waxa uu dhacay markii uu 2 sanno jir ahaa iyadoo gaariga waalidkiis uu ku dhacay gaari weyn. Ribery markaas looma xirin suunta badbaada taasoo keentay inuu isagoo soo duulaya ku dhaco muraayada gaariga.